Okanye: ungathini ukuba uzihlaziye ebantwini
Uninzi lwemigaqo eqhelekileyo yengqiqo yokuzama kwiincindi zansuku zonke ziyasebenza kwizintambo zokuhamba. Ukuba iipantshi zeemilenze zijikeleza ezinqeni zakho okanye izihlalo zihlala zincengayo, zibuyela kwi-rack. Kodwa iintlobo zezinto ozenzayo ngaphandle - ngokunyanisekileyo, kwaye mhlawumbi ufuna i-intanethi ephakamileyo kunokuba isisigxina-kuthetha ukuba kufuneka ubeke ibhulukhwe yakho yokuhamba kwiimvavanyo ezimbalwa. Yeka ezi zinto, kwaye unokufumana ufumana inkcazelo entsha yokuchaswa kwindlela.
Ngaphambi kokuba ndifike kwiimvavanyo, nolu luhlu olukhawulezayo lwemiqathango ongayifumana xa uthengela ukuhamba ngeebhulukhwe:
Amadolo athile. Amadolo anqunywe ukuvumela uluhlu olupheleleyo lweentshukumo ngaphandle kokubopha.
I-crotch ye-Gusseted. Indwangu eyongezelelweyo kwiindawo ezilungileyo ukuze ungahluli iincindi zakho ukuba unqumla umlambo. (Kwi-bhulukhwe ephezulu, oku akuyi kudala ukugqithisa okanye ukuguqa.)
Ngamaxesha athile amaqhawe ahambayo afika kunye ne- DWR yembatho - uhlobo lokungena kwamanzi - okanye ukulinganiswa kwe-SPF ukuba ziboshwe ngokukhawulezileyo ukuze zikhusele elangeni. Ezinye ziphinda zixutywe ne-insects repellent.
Ukuba uhambela nayiphi na enye imigaqo udidekile ngayo, khangela i-glossary yokunyuka kwendawo yeenkcukacha ngokukhawuleza, kwi-contextual definitions.
Ukuzama Ukuhamba Kweentambo
Ukuthuthuzelwa kunye nenkululeko yokuhamba iyona nto ibalulekileyo. Ukuba nayiphi na into yebhulukhwe iyancipha okanye ingakhathazeki njengoko uhamba ngeenxa yokugcina ivenkile, kuya kubacaphukisa ngokwenene xa uthatha inyathelo lakho elingu-10 000 endleleni.
(Kuphela kwirekhodi, malunga neekhilomitha ezi-5 kuphela.) Ngoko ke ukuba ucinga ukuba uyazi ubungakanani bakho, qwaba uzama amathambo amatsha ngaphambi kokuba uwathengise, okanye ulungele ukuwabuyisela xa engafanelekanga.
Emva kokuba ubenayo, nantsi indlela yokuvavanya ibhulukhwe yakho yokuhamba ngokufanelekileyo kunye nenkululeko yokuhamba:
Hlala phantsi. Ukuba iinjongo ziziva zixakekile kwisihlalo kuzo zonke, zitshintshe okanye zizame ubukhulu obukhulu.
Bend kwaye uguqule amadolo akho. Bese uphakamisa idolo ngexesha, kufuphi nesifuba sakho okanye ngokusondeleyo njengoko unokufumana. Ukuba naliphi na ixesha iifama zibopha, abayi kuvuyisa kwindlela.
I-Squat phantsi njengokungathi ulungise umlilo okanye uhlola into emhlabathini. Hlola iikhonkco kwibhulukhwe-akufanele zikhwele kakhulu kwaye ziveze imilenze yakho ephantsi kwimozulu. Emva koko khangela i-back of the bants to make sure your yett is still. Amapantsa aphantsi angabikho nje ekuthandwayo ngabavelisi bezixhobo zangaphandle ngoku njengoko babeyiminyaka embalwa edlulileyo kodwa abambalwa babo basesekho apho, ukulungele inyanga bakho abangamaqabane abangalindelekanga xa ugoba ukuze ubophe iibhotile zakho okanye ukhawule ententeni yakho .
Ekugqibeleni, phinda naluphi na olunye uhlobo olulindelekileyo ukuba ulwenze kwimigudu yakho. Ngokomzekelo ukuba wenza uninzi lwe- scrambling , velisa amadolo akho ngasekuqaleni kwesifuba sakho okanye ukhuphuke uze uye phantsi kwibhentshi yokugqoka ngamaxesha ambalwa ukuqinisekisa ukuba ibhulukwe ayiyikuthintela ukuhamba kwakho konke.
Igama lokugqibela: Ukuba uthengisa nge-intanethi, ndincoma kakhulu, ndincoma ukuba wenze uluhlu lweebhulukhwe ofuna ukuzithenga, uze uhlasele ivenkile yakho yezemidlalo yokuzonwabisa ukuze uzame kwaye ubale ubungakanani obufunekayo. Ubunzima beembatho abukodwa phakathi kwabavelisi (ubuncinane abengekho kwindoda yezintambo zokuhamba ngamabhinqa), ngoko ubuninzi be-8 kwisiza esinye sinokuba lukhulu kakhulu ngelixa ubungakanani obufanayo bubuhlungu ngokukrakra kwenye i-brand.
Ukwenza ukuvavanywa kwangaphambili kusindise ixesha ekupheleni, kuba awuyi kuba nexhala malunga nokuthunyelwa kwempahla ukubuyela emva nangaphandle.
Ngoku ukuba ulungiselelwe ibhulukwe, ngaba uyazi indlela yokuqinisekisa ukuba ibhokisi lakho kunye neebhoti zokuhamba zihamba kakuhle?
Uqeqesho lwe-Volleyball: Iibhola zokuLawula ibhola